Ukuhlaziywa kweJabra kuLuhlu lweMveliso yayo ngee-Elite Series zeeNtloko ezintathu Iindaba zeGajethi
UJabra uhlaziya uluhlu lweemveliso zakhe ngee-headsets ezintathu ze-Elite
UMiguel Hernandez | 31/08/2021 17:26 | ngokubanzi, Izaziso
UJabra uzibophelele kwitekhnoloji kunye nesandi somgangatho, sihlalutye uninzi lwezixhobo zabo apha kwiActualidad Gadget kwaye ayiyeki ukusothusa ukuba bafuna ukuthatha ithuba kulo nyaka 2021 ukumilisela uthotho lweemveliso ezinomtsalane ukuqhubeka nokugcina okuphezulu inqanaba elinengxolo engenazingcingo. UJabra uzisa i-Elite 3, i-Elite 7 Pro kunye ne-Elite Active, ii-headphone zayo ezintsha kubo bonke abaphulaphuli.
1 UJabra Elite 3
2 IJabra Elite 7 Pro
3 Umhla wokukhutshwa kunye namaxabiso
UJabra Elite 3
IJabra ingena kwiimveliso zenqanaba lokungena ngokuthe tyaba kunye ne-Elite 3, isixhobo esibonelela ngezithethi ezi-6-millimeter, i-in-app equalizer, codec kunye Itekhnoloji ye-Qualcomm aptX HD ukuya kuthi ga kwiiyure ezisixhenxe zokuzimela eziya kwandiswa ziye kwiiyure ezingama-28 ngenxa yebhokisi yokutshaja ebandakanywayo. Ngokucacileyo asinaso isikhalazo sokurhoxiswa kwengxolo, kodwa sigxininisa ukuba enkosi ngomsebenzi we-HearThrough, abasebenzisi banokufikelela kwizandi zommandla wabo. Uluhlu lwemibala luya kubandakanya i-navy blue, igrey emnyama, i-lilac kunye ne-beige elula.
IJabra Elite 7 Pro
Ezi ntloko zintsha ziphezulu zivela kwiJabra ziya kubandakanya iMultiSensor Voice, itekhnoloji yeJabra ukuhambisa isandi somgangatho wobungcali. Ngokucacileyo ihamba kunye netekhnoloji yokurhoxisa ingxolo esebenzayo eye yabonakalisa inkampani.
Kwinqanaba lokuzimela siyakonwabela iiyure ezili-9 zokudlala ngokuqhubekayo kunye ne-ANC evuselelweyo eya kuthi inyuke iye kwiiyure ezingama-35 ukuba sithetha ngebhokisi yokutshaja, leyo, ngendlela, ine-IP57 yokumelana namanzi ngokupheleleyo. Ukuthatha ithuba ngetekhnoloji ye-aptX HD, isebenzisa iBluetooth 5.2 kwaye ngokucacileyo babheje kusetyenziso oluzimeleyo (ngaphandle kwesiphatho sesandla), kunye nenkqubo yokudibanisa ngaxeshanye kwizixhobo ezininzi.
Ngokwenxalenye yayo, kunye ne-Android, abancedisi abaphambili abanjengoKhaya likaGoogle kunye ne-Alexa baya kulawula inkqubo yokudibanisa, ngelixa nge-iOS baya kusebenza ngokukhethekileyo ngeSiri.
IJabra Elite 7 esebenzayo ngoovulindlela ShakeGrip TM ukutyabeka, kufanelekile kwabo banendlela yokuphila esebenzayo.
Umhla wokukhutshwa kunye namaxabiso
I-Elite 3 iya kufumaneka ukusuka nge-1 kaSeptemba, ngelixa i-Elite 7 Pro kunye ne-Elite Active ziya kufumaneka ukusuka nge-1 ka-Okthobha. Zonke iimveliso ziya kufumaneka kwiivenkile ezikhethiweyo ngexabiso elinconyelweyo:
I-Elite 7 Pro: € 199,99
I-Elite 7 iyasebenza: € 179,99
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UJabra uhlaziya uluhlu lweemveliso zakhe ngee-headsets ezintathu ze-Elite
UPhilips wenza izibane zakhe zeHue zingqungqe kwisandi seSpotify
I-Xiaomi Mi Lamp Lamp 2, uhlalutyo ngexabiso kunye neempawu